Ukujongana nokunakekelwa ekhaya emva kweminyaka engama-40
Kwesinye ifilimu eyaziwayo i-heroine yathi "kwiminyaka engama-40 ubudala ubudala ubomi buqala nje." Kwaye kwiintlobo ezininzi, ngokungathandabuzeki, kwakulungile. Emva kweminyaka emashumi mane sisazi kakuhle into esiyifunayo, kwaye ngaphezu koko - siyazi ukuphumeza oku. Enye icaphukile: ithemba lethu alinxulumani nesikhumba ebusweni.
Xa uneminyaka yobudala, iinkqubo zokuhlaziywa kwesikhumba ziphosa. I-epidermis iyancipha, i-collagen fibers iyawa, ugcino lwamafutha angaphantsi kancinci luba buthathaka, umsebenzi weengcungcuthe ze-sebaceous iyancipha. Konke oku kukhokelela ekubeni ulusu lwaluphi na uhlobo emva kweminyaka engama-40 luba nzima ukuma kunye nokuxhaswa komzimba. Ulusu luyakhulelwa amanzi, lulahlekelwe ukonakala kunye nokunyanzelisa.
Nangona kunjalo, ukujonga ezininzi iinkwenkwezi zethu, unokuqiniseka ukuba oku kunokutshatyalaliswa. Khangela i-chic emva kweminyaka engama-40.
Imeko yesikhumba emva kweminyaka engama-40 ixhomeke kakhulu kwindlela ebeyenziwa ngayo ngaphambili. Ukuba uqale ukunyamekela ulusu lomntu omncinci ukususela kumncinane, kwaye wenza ngokufanelekileyo, emva koko emva koku-40 luzele ngamandla. Ixabiso elihle malunga nombonakalo wakho linokuphumla okufanelekileyo kunye nesondlo esifanelekileyo . Ubuhle buvela ngaphakathi, kwaye akukho ndlela yokuzicoca kule ndawo izakufaka endaweni. Ukunyamekela ngokunyameko ekudleni kwabo kunye nendlela yokuphila kuyona nto iphambili yendlela yokubonelela ngononophelo kwesikhumba ekhaya emva kweminyaka engama-40.
Ukutya kwakho kufuneka kulungelelanise. Ulusu, kunye nomzimba wonke, lufuna zonke izondlo ezibalulekileyo. Ukungalingani kokutya kukukhawuleza ukukhunjulwa yilo okanye eso sifo. Kwaye isikhumba sakhawuleza sichaza oku ngeemeko zalo. Akumangalisi ukuba bathi zonke izifo zibhalwa ebusweni.
Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ekuzaliseni imenyu yakho ne-calcium, i-magnesium kunye nama-acid acids. Akunakwenzeka ukuba okwaneleyo kwezi zinto zinganikwa ukutya. Ngoko ke, qwa lasela izongezelelo zokutya ezifanelekileyo.
Ukongeza kwisondlo esifanelekileyo, ulusu emva kweminyaka engama-40 lufuna ukukhuselwa . Ikhumba elidala lithinteka kakhulu ilanga, umoya, iqhwa. Kukulungele ukuyeka ukutyhulwa (kokubambisa okwenyama kunye nokufakelwa). Ehlobo, qiniseka ukusebenzisa i-sunscreen, kwaye phakathi kwama-10 no-15 iiyure elangeni akufanele kubekho. Ebusika nakwixesha elide-kubalulekile kuyimfuneko yokusebenzisa ama-creams okukhusela ngesiseko seoli. Baya kunceda ukuphepha kwimiphumo enjalo engathandekiyo, njenge-couperose kunye ne-allergies, ebonakalayo yinkcenkceshe kakhulu kwi-skin emva kweminyaka engama-40.
Indlela, ukondla kunye nokukhusela isenzo ngokubambisana nokunyamekelwa kwimihla ngemihla, eneempawu zayo.
Ukunakekelwa kwesikhumba emva kweminyaka engama-40, kuba ngumyalelo wokusebenzisa umgangatho womhla nobusuku. Qinisekisa ukuba uqinisekisile ukuba iimveliso zakho ezikhethiweyo zifanisa uhlobo lwakho lolusu.
Khumbula ukuba nangona ulusu olunamafutha emva kweminyaka engama-40 lufuna ukunyanzeleka! Umsebenzi weentlanzi ezixhambileyo kunye nokungcoliswa kwamanzi kweeseli ziinkqubo ezahlukeneyo, njengobomvu kunye nomuncu.
Xa usebenzisa izicumbiso, musa ukululula ulusu. Zonke iintshukumo mazijoliswe kunye nemigca yokusila. Faka isicelo sikhilimu ungagxobhozi, kodwa ukunyanzelisa ukunyanzelisa. Oku, kwindlela, i-massage yolusu.
Gwema ukusebenzisa i-mask-film. Xa isuswe, ulusu luyakululwa kwaye lulimale. Kwiimeko ezigqithiseleyo, kunye nekhumba elidibeneyo okanye elinamafutha, lisebenzise kuphela kwi-T-zone (ibunzi, impumlo, i-chin).
Xa uhlamba kulungile ukusebenzisa ibrashi ebusayo. Ubumnene bethinta ukujikeleza kwegazi okusebenzayo kwaye ngokugqithiseleyo kufaka iiseli ezifileyo ze-epidermis.
Sebenzisa kuphela izihlunu ezithambileyo kunye neengqungquthela ezigqithiseleyo. Kungcono ukuba iipelisi. Kwaye kungcono, ukhethe okukhethiweyo kumaski kunye neziqhamo zamacidi. Ukutshatyalaliswa kokubambisana phakathi kweeseli, basebenze njengobuncwane obumnene. Yaye le nto ifuna isikhumba seminyaka.
Musa ukukhangela izimonyo. I-cosmetology yanamhlanje inika ukuphumelela kwangoku kwabesetyhini emva kweminyaka engama-40. Khumbula ukuba imilinganiselo kunye nemigangatho ephumelelayo ayikwazi ukuhlambulula. Ingqwalasela ngokukodwa kufuneka ihlawulwe kuma-creams aqukethe i-retinol, i-hyaluronic acid, i-collagen, iivithamini E, C, F.
Cinga kathathu ngaphambi kokusebenzisa izimonyo kunye neengxenye zemvelaphi yezilwanyana (iselula, i-placental, njl.). Ezi zithako zihlala zisebenza kwimvelaphi ye-hormonal, kwaye isenzo asikaqondi ngokucacileyo. Emva kweminyaka engama-40 emzimbeni, abasetyhini bafumana utshintsho lwe-hormonal. Yaye kwinqanaba elinjani i-cosmetics iya kubashukumisa, -iyinto engalindelekanga.
Impembelelo yenkomfa ukusuka ngaphakathi nangaphandle ngumgaqo oyintloko wendlela yokujongana ngokufanelekileyo kwesikhumba ebusweni ekhaya emva kweminyaka engama-40. Oku kuya kukunceda ubonakale umncinci kwaye ukhange ngaphandle kweenkqubo ezibizayo kunye nokungenelela okutyathwayo.
Ioli e-Olive ubuhle
Masks ngobuso nge-aloe: inzuzo, ukusebenzisa kunye nokupheka
I-Freckles kunye nezinye iindawo zemibala
Indlela yokukhenkca ngokukhazimulayo ebusweni
Ukuphuhliswa kwezakhono ezifanelekileyo zeemoto zomntwana nge-dtsp
Ukunciphisa isisindo ngoncedo lwesidlo semifuno
Dorado nge salsa
Ifotyi ekhusiweyo yenkukhu
Indlela yokugcina isimo somzimba ebusika?
Ukuzivocavoca ukunyanzelisa isisu, isisu kunye nemilenze
Isaladi yesadada ngekhilimu omuncu
Amagama amabhinqa azalelwa ngo-2016: njani ukhetha igama elihle lomntwana?
I-Apple i-masks yobuso nentamo
Kuthekani ukuba ndiyamthanda nomzala?
Ungakhetha njani iifayile ezikhokelayo?
Iyiphi i-massage yase-Old Slavonic kwaye xa isetyenziswa